အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဒီမိုကရက်တစ် ခက်ဆစ် အသုံးအနှုန်းများ
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒီမိုကရက်တစ်ခက်ဆစ် အသုံးအနှုန်း များသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းသေချာသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လူထုစကားဝိုင်းများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် အသုံးအနှုန်းများကို ဝေမျှရာတွင်စတင် အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး တိကျသော အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဤခက်ဆစ်အသုံးအနှုန်း စာအုပ်အား ပိုမိုတိုးတက်မှု ရှိစေရန် အတွက် လူကြီးမင်းတို့ထံမှ အကြံပြုချက်များကို ဒီမိုကရေစီနှင့်ရွေးကောက်ပွဲအကူအညီ ပေးရေး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင် တို့မှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါသည်။
Polling station +++
This English – Myanmar Glossary of Democratic Terms aims to provide clear and objective explanations of terms relevant to Myanmar’s transition to democracy. Its purpose is not to create static definitions, but to serve asastarting point for public discourse and generateashared democratic vocabulary.
International IDEA and the Local Resource Centre look forward to your feedback and comments in order to turn this Glossary intoaliving document.